Afar aasaasi ah oo ku saabsan Ilaah, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Xaaskeyga Eira waxay ii sheegtaa inay aad u sahlan tahay inaad naftaada u muujiso si xirfad iyo adag markay kuhadlayaan Ilaah. Adeeggaygii hore ee kaniisadda, markii maskaxdaydu ka buuxdo muxaadarooyin fiqi ahaaneed oo ay ahayd inaan ka qeyb galo muddadii afarta sano ahayd ee aan ku sugnaa Oxford iyo laba sano oo aan ku sugnaa Cambridge, Eira wuxuu yiri waxaan mararka qaarkood si aad ah ula yaabanaa markaan kahadlayay kaniisada. wacdiyey.
Waxay ka dhigtay inay shaqadeeda ka dhigto habka aan wax ugu wacdiyo aasaaska caqiidada masiixiga si sahlan loo fahmo, welina waa ay qabtaa
Dabcan way saxsan tahay. Ciise wuxuu ka dhigay meeshiisii ​​inuu ku dhawaaqo ereyada ugu fudud markuu barayay iimaanka iyo nolosha. Wuxuu ogaa in haddii qofna fahmin waxa uu sheegayo, aysan macno lahayn in waxba laga sheego. Haddii aad u sharaxdo wax si cad loo fahmi karo, macnaheedu maahan in aan rasmi ahayn. Aynu kahadalno qodobo aasaasi ah oo ay tahay inaan wada ogaano oo ku saabsan Ilaah.
Ilaah waa mid xiiso leh
Haddii wacdi ku saabsan Ilaah uu waligiis u muuqdo mid caajis nagu ah, waxaa sabab u ah wacdiyaha maxaa yeelay isagu ama iyadu ma raacin qawaaniinta aasaasiga ah ee isgaarsiinta. Laga yaabee inaan mas'uul ka nahay sababta oo ah taxadarradu kuma filneyn. Waxaan hubin karnaa in dambigu waligiis Ilaah la jiro. Waxyaabaha xiisaha leh ee adduunka oo dhami waa wax aan ka ahayn tafsiir muuqda oo Eebbe abuuray. Dunida ma jirto daraasad xiiso badan oo ka xiiso badan barashada Ilaah. Baybalku wuxuu noogu yeeraa inaan wax baranno markii ay naga codsato inaan Ilaah ku jeclaano maskaxdeenna oo dhan.
Dabcan, badanaa waa sahlan tahay in la barto Ilaah adoo eegaya sida abuurku u muujinayo rabbaaniga. Tani waa sida ugu fudud ee aan ugu fududahay inaan eegno fikradaha qorraxda ee abuurista halkii aan toos uga eegi lahayn iftiinka iftiinka qorraxda.
Haddii aan eegno qaansoroobaad, waxaan ku raaxeysanahay midabada kala duwan, laakiin midabyadan midkoodna ma ogaan karo haddii iftiinka qorraxda uusan ka muuqan. Sidaas awgeed dunidu xiiso uma yeelan lahayd haddaan ka turjumaynin dabeecadda Eebbe.
Markaan kahadalno inuu Eebbe abuuray, uma jeedno inuu Eebbe riix batoonka mar uun ka hor iyo in wax waliba ay noqdeen. Waxaan sidoo kale aaminsanahay in xaqiiqada aan halkaan joogno ay dhamaanteedu kuxirantahay firfircoonida hal-abuurka Eebbe.
Toddobaadkii la soo dhaafay waxaan isku dayay inaan ogaado sababta dadka qaarkiis ay dareemayaan in sayniska uu ka beeniyay diinta. Runtii taasi run ma aha. Sayniska iyo diinta waxay isweydiiyaan su'aalo gabi ahaanba ka duwan. Sayniska ayaa weydiiya: "Sidee wax u shaqeeyaan dunidan?" Ugudambeyntii, fiqiga ayaa weydiinaya: "Waa maxay noloshu maxay tahay maxay tahay micnaha iyo ujeedada wax walba?" Runtii si fiican ayaynu ula qabsan lahayn anaga oo aan fahmin daabacaadda yar ee shuruucda sayniska, laakiin haddaan marna wax laga weydiin macnaha iyo ujeeddada nolosheenna ee dhulka, sidee ugu noolaan karnaa nolosha ugu wanaagsan oo aan u adeegsan karnaa sida ugu wanaagsan? innaga iyo adduunkuba aad ayaan u liitaa.
Kuwo kale waxay u qaadan karaan in Ilaah waqtigiisu dhamaaday maxaa yeelay waxaa kaliya oo suurta gal ah in lagu caabudo Eebbe afkiisa buugga ducada hore. Waxay u badan tahay in haddii aad sameysid cilmi-baaris dhameystiran, waxaad ka heli doontaa adeegyada buugga tukashada salaadda kaniisad aan ka fogayn gurigaaga. Aniga shaqsi ahaan waxaan ugu mahad celinayaa Ilaah taas. Si kastaba ha noqotee, adeegyada badankood maanta waxay adeegsadaan luqad aad u kala duwan. Adeegyada qoyska ee heesaha casriga ah, oo ay qabtaan kooxaha gitaarka oo ay taageeraan mashruucyada LCD ayaa sii kordhaya caan.
Kuwo kale waxay u maleyn karaan in masiixigu waqtigiisu gaba gab yahay maxaa yeelay waxay la kulmeen Masiixiyiin aragtidooda nolosha aaney is le'ekaanin naftooda. Hagaag taasi waa adag tahay! Muddo intee le'eg ayay lagama maarmaan ahayd ama xitaa caafimaad qabeen dhammaanteen inaannu isku mid nahay?
Ilaah baa ku lug leh oo ku lug leh wax walba
Waxay caado u ahayd in nolosha laba loo kala qaado. Waxaan kala soocnay "quduus" iyo "cilmaani". Waxay ahayd qayb xun. Waxay tilmaamtay in qaybo ka mid ah nolosha ay Ilaah muhiim u yihiin, waxyaabo sida kaniisad la aado, salaadda la tukado iyo akhrinta Kitaabka Quduuska ah, laakiin waxyaabo kale maahan ganacsiga Ilaah, sida shaqada, tuurista tuurista, ama socod u socodka.
Xitaa haddii aan ku adkaysanno kala-qaybsanaanta, Eebbe waa mid adduunyo oo dhan, danaynaya, oo gabi ahaanba ku lug leh wax kasta, oo aan ka reebin qaybaha diinta laakiin uu ku jiro wax kasta oo kale. Tani waa sababta oo ah adiga iyo aniga, wax kasta oo aan sameyno, wax kasta oo aan nahay, ayaa muhiim u ah 'Ilaah ku lugta leh'.
Eebbe wuu abuuray nolosha oo dhan, nolosha walbana waa u muhiim isaga. Ciise wuxuu yidhi: Bal eeg, albaabkaan taaganahay oo garaacayaa. Ku alla kii codkayga maqla oo ii furo, waan galayaa. Dabcan isagu wuxuu ku yaal albaabka kaniisadda, laakiin sidoo kale wuxuu ku yaal albaabka baararka, warshadda, dukaanka iyo abaarta. Markaad aqrinaysid qoraalkaan, Eebbe wuxuu garaacayaa albaabka aad joogtaanba.
Ilaah waa wax aan la fahmi karin
Sanado badan kahor waxaan la kulmay nin sheegay inuu haysto barista Holy Holy Holy si fiican madaxa loogu duubay. Muddo kadib wuxuu ku fashilmay jaamacada oo wuxuu ku dhammeeyay waxbarashadiisa isagoon wax shahaadooyin ah qaadan. Jid ahaan, wuu u qalmaa. Wuxuu runtii umuuqday inuu u maleynayo in maskaxdiisa maskaxeed inay ku filnaan laheyd garashada sirta Ilaah, laakiin dabcan Ilaah waa ku weyn yahay taas.
Laga yaabee inaan kulligeen ka baran karno. Waxaan rabnaa inaan ku yareeyno Ilaah mid aan fahmi karno. Tijaabinta fiqiga fiqi ahaaneed waa in la doonayo in lagu yareeyo ilaahey cabirka qaaciddada caqiido. Wadaadku wuxuu isku dayayaa inuu Ilaahay u yareeyo cabirka hay'ad. Masiixiyiinta qaar ayaa jirrabaya si ay ugareeyaan Ilaah cabirka tan ama khibrada diintaas. Laakiin intaasna kuma filna. Eebbe aad buu u weyn yahay, aad u ballaadhan yahay, oo aan xad lahayn, wuxuuna jebin doonaa xiridda dhammaan qaacidooyinka, hay'ad kasta, iyo waayo aragnimo kasta oo aan ka fikiri karno.
Waxaas oo dhami waa qayb ka mid ah nolosha Masiixiyiinta iyo guud ahaanba fahamka Eebbe. Si kasta oo aan u barano Ilaah, sida ugu wanaagsan ee aan isaga u naqaanno iyo inta aan u jeclaano oo aan isaga u caabudno, waxa marwalba jiri doona si aan xad lahayn u ogaansho, jacayl iyo caabudid. Waa inaan u dabaaldegnaa oo aan ugu raaxeysanaa tan si joogto ah; Waxa aan shaqsiyan ila yaabayna waa in Eebbe Awoodda Awoodda iyo Sharafta Leh, dabeecadda aynaan weligeen fahmi doonin, iskaba daa kelidaa, ayaa adiga ku sugaya aniga iyo aniga inaan sahaminno fursado badan oo nolosha hadda ah.
Ilaah waa mid xiiso leh oo isaguna wuxuu inooga helay xiiso. Ilaahey waa cusboonaanayaa wuuna danaynayaa maanta iyo berriba - sidoo kale aniga ila joog. Ilaah wuu ku lug leeyahay oo wuxuu doonayaa in la aqbalo annagana annaga naga mid ah ka qaybqaadashada. Ilaah waa wax aan la fahmi karin oo had iyo jeer wuxuu garab istaagi doonaa saaxiibkeen. Ilaah had iyo goorba wuu kugu barakeeyaa sidaad u nooshahay oo aad u korayso oo ugu farxid wax kasta oo taas micne inoo yeelan kara maalin kasta.
Waxaa qoray Roy Lawrence